ဖိုးဦးတောင် ရှေးဟောင်းစေတီတော် ထီးတော်အလှူရှင်မှာ ဦးဇော်မင်းခိုင်သာဖြစ်ကြောင်း သတင်းစ?? - Yangon Media Group
ပဲခူးတိုင်း ဒေကြီး ပြည်ခရိုင် ပန်းတောင်းမြို့ နယ်တွင်တည်ရှိသည့်ဖိုးဦးတောင် ရှေးဟောင်း စေတီတော်ထီးတော် တင်လှူခြင်း၏ အလှူရှင်အစစ်မှာ ဦးဇော်မင်းခိုင်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ဘုရားထီးတင်ပြု ပြင်ခြင်းနှင့် ကိစ္စနှင့် ပက်သက်ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်က Aung Naing Htwe ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်မှ တစ်ဆင့်ဝေဖန်သည့် သတင်းတစ် ပုဒ်တက်လာခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာနဝင်း အတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သာသနာ့ နုဂ္ဂဟအသင်းရုံးတွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်စဉ် ကာယကံရှင်ဖြစ်သူက ယင်းကဲ့ သို့ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဆရာ တော်ကြီးတွေ ဦးဆောင်ဦးရွက် လုပ်တဲ့ဘုရားလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ထီးတင်တဲ့ကိစ္စက ကျွန်တော်ဇော် မင်းခိုင်လှူတာပါလို့ သြဝါဒအကြိမ် ကြိမ်ခံတဲ့ အကြိမ်တိုင်းပြောခဲ့ပါ တယ်။သဒ္ဒါစိတ်ရှိမှ အလှူတစ်ခု ကပြီးမြောက်တာပါ။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံ ကိုယ့်ထမင်းစားပြီး သာသာနာ အတွက် ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပါ တယ်” ဟု အလှူရှင် ဦးဇော်မင်းခိုင် က ပြောသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက် ညနေတွင် Aung Naing Htwe ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် အကောင့်မှ တစ်ဆင့်အဆိုပါဘုရား ထီးတင်ပြုပြင်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ် သက်ပြီး ဝေဖန်သည့်သတင်းတစ် ပုဒ်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ကြောင်း၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ပါပြောဆိုချက်များအရ ဌာနဆိုင် ရာလူကြီးများ ၊ သြဝါဒဆရာတော် ကြီများနှင့် ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်များ အားချဉ်းကပ်ကာ ထီးတော်တင် မည့် အခွင့်အရေးကို ရယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကြောင်း၊ မည် သည့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ ဆရာတော်များနှင့် ဂေါပကအဖွဲ့ ဝင်များကိုမှ ချဉ်းကပ်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ကုသိုလ်စိတ်ဖြင့်သာ လုပ်ဆောင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တာဝန်ရှိသူများ ဆရာတော်များနှင့် ဂေါပကအဖွဲ့ များမှလည်း ဓမ္မလမ်းကြောင်းနှင့် အညီသာ ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အလှူရှင် ဦးဇော်မင်းခိုင်ကပြော သည်။
ထီးတော်တင်ရန် ခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီးနောက် အလှူရှင်ဦးဇော်မင်း ခိုင်ကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက် တွင် အကြိမ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ဝေဖန် ရေးသားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သော် လည်း ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းမပြု ခဲ့ကြောင်း၊ အများပြည်သူနှင့် သက် ဆိုင်သည့်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ချုပ် နှင့် နယ်စပ်တောင်တန်းဒေသ သာသနာနုဂ္ဂဟအသင်းကိုပါ ထိ ခိုက်လာသည့်အတွက် မီဒီယာ များနှင့်တွေ့ဆုံကာ အဖြစ်မှန်ကို ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အလှူရှင် ဦးဇော်မင်းခိုင်ကပြော သည်။ နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင်ဆရာ တော်သံဃာတော်များနှင့် သြဝါဒ ခံယူပွဲ ကျင်းပခဲ့ရာတွင်ကန့်ကွက် လိုသူများရှိပါက လာရောက်ကန့် ကွက်ကြရန် ဖိတ်ကြားခဲ့သည့် အတွက် ယခင်အလှူရှင် အမေရိ ကန်ပြည်ထောင်စုတွင် နေထိုင် သည့်ဦးအောင်ကျော်ခိုင်၏ ကိုယ် စားလှယ်ကိုပါ ဖိတ်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”ရွှေဘုံသာ မုနိမှာကျွန်တော် တို့ ထီးတော်တင်တဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့စီမံတွဲဖက် အတွင်းရေးမှူးဖြစ်တဲ့ ဦးဇော် မင်းခိုင်က ဖိုးဦးတောင်ကိုသွားပြီး ဖူးမျှော်ရင်းကနေ ဘုရားကြီးထီး တော်စောင်းနေတယ်။ ရွှေတွေကွာ နေတယ် ၊ တန်ဆောင်းတစ်ခုပြို ပျက်နေလို့ လှေကားမကောင်းတာ တွေ့လို့ သူလှူချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ တစ်ယောက်တည်းနဲ့တော့မပြင်ချင် ဘူးအစ်ကို၊ သာသနာ့နုဂ္ဂဟအသင်း နာမည်နဲ့ ပြုပြင်ချင်တယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော် ဒေါက်တာရဲအောင်နာ မည်နဲ့လျှောက်လိုက်တာပါ။ လျှောက် တုန်းက ရွာဘုရားမြို့ဘုရားပေ မယ့်နောက်တော့ ရှေးဟောင်းစာ ရင်းမှာပါသွားလို့နိုင်ငံတော် ဘုရား ဖြစ်သွားပါတယ်။ သာသနာရေးဝန် ကြီးကို လျှောက်တယ်၊ ခွင့်ပြုမိန့် ရတယ်။ ပဲခူးတိုင်းအစိုးရကနေ ကော်မတီဖွဲ့ပြီးတော့ ဒီဘုရားကို ပြုပြင်ဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်။ ဖိုးဦး တောင်စေတီရဲ့ ပင်မအလှူရှင် ဦး ဇော်မင်းခိုင်ကိုလည်း မေးလို့ရ ပါတယ်” မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင် ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ချုပ် နှင့် နယ်စပ်တောင်တန်းဒေသသာ သနာနုဂ္ဂဟအသင်း ဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါက် တာရဲအောင်က ပြောသည်။
ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် ဖိုးဦး တောင် စေတီတော်မြတ်ကြီးအား ရွှေထီးတော်တင်လှူခြင်း ကိစ္စနှင့် ပက်သက်ပြီး သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနမှ လျှောက် ထားသူ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ချုပ် နှင့် နယ်စပ်တောင်တန်းဒေသသာ သနာနုဂ္ဂဟအသင်းဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာရဲအောင်၏ လျှောက် ထားခြင်းနှင့် ပက်သက်ပြီး စီမံခန့် ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး အ မှတ်စဉ် ၈/၂ဝ၁၈ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း နှင့် မှတ်တမ်းတင်ရန် အကြောင်း ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ”အဖြူရောင်ပိတ်စ ပေါ်မှာ အမည်းစက်တစ်စက် အထင်မခံနိုင် ပါဘူး။ တစ်ကျပ်ပဲလှူလှူတစ်ပြား ပဲလှူလှူ ကုသိုလ်စိတ်ကသာအရေး ကြီးပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးကုသိုလ်စိတ် အပေါ်မှာကန့်ကွက်တာ မရှိစေ ချင်ပါဘူး။ ကိုယ်လှူတဲ့အလှူသည် ကုသိုလ်ရဖို့ အတွက်လှူတာပါ။ တိုက်ခိုက်မှုပေါင်းစုံနဲ့ လုယက်ပြီး လှူတာလို့ လူတွေအပြောကိုလည်း မခံချင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဆရာ တော်ကြီးတွေကို ဒီကိစ္စလေးတွေ ရှင်းပေးဖို့ လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။သူတို့လှူမယ်ဆိုရင်လည်း သြဝါဒခံ ယူပြီးရင်လက်လွှဲပေးမယ်။ လက် လွှဲပေးမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို လည်းနိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက် သြဝါဒခံ ယူပွဲမှာလည်း ကျွန်တော်ပြောခဲ့ ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်”အလှူရှင် ဦးဇော်မင်းခိုင်က ပြောသည်။
သူရဦးရွှေမန်း တည်ထောင်မည့် ပါတီသည် NLD ပါတီနှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့ ဖြစ်လာနိုင်ဟု သုံးသပ်မှုများရှ??